Kulan ka dhacay degmada Hodan oo looga arinsanaayey arimaha Degmada | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kulan ka dhacay degmada Hodan oo looga arinsanaayey arimaha Degmada
Kulan ka dhacay degmada Hodan oo looga arinsanaayey arimaha Degmada
Waxaa xalay xarunta Degmada Hodan ee gobolka Banaadir ka dhacay kulan uu gudoominayay Guddoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Axmed Xassan Iimaan.
Kulankan ay kasoo qeyb galeen Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa intii uu socday looga hadlay dar dar geinta dhaqaalaha kasoo xarooda Degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir.
Guddoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Axmed Xassan Iimaan ayaa ka dhageestay Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir sida ay u socdaan dar dar galinta dhaqaalaha ay kasoo xareeyaan canshuuraha ay qaadaan.
Gudoomiyaasha degmooyinka qaarkood ayaa sheegay in ay jiraan caqabado xiliyada qaar kala kulmaan canshuuraha laga qaado xarumaha ganacsi ee kuyaala degmooyinka, waxa ayna xuseen inta badan gudoomiyaasha in si fiican u socoto dar dar gelinta dhaqaalaha.
Ugu Dambeyn Guddoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Axmed Xassan Iimaan ayaa uga mahad celiyay Gudoomiyaasha degmooyinka shaqada ay hayaan waxa uuna ku booriyay in halkooda kasii wadaan dar dar galinta dhaqaalaha gobolka Banaadir.
Previous article80 Jir sheegay Dhulkoow ku dhashay Xoog looga Heysto magaalada Muqdisho
Next articleRa iisal wasaari Hore Xasan Cali Kheyre oo Dhaq dhaqaq siyaasadeed ka bilaabay magaalada Muqdiaho
Muuse Biixi muxuu kaga meermeerayaa qaabilaada safiirka China.?
3 Masuul oo isugu soo hartay magacaabida Xilka Raiisal wasaaraha Soomaaliya